Gonesa Yako Nhare mbozha App Chitoro Kuonekwa neMobile Action | Martech Zone
Chitatu, June 10, 2015 Chipiri, June 9, 2015 Douglas Karr
Mobile Action parizvino inobatsira pamusoro pe70,000 maapplication kuwana vashandisi nesarudzo yemashandisi ekushandisa maturusi, ongororo, uye ichangobva kuburitswa yekufungidzira ongororo.
Iyo kambani yakavaka Big Data Injini inopa vanogadzira maapps vane chiratidzo chekuonekwa icho chinokoshesa mamirioni anopfuura masere emadhora, kusanganisira chikamu, nzvimbo, mwaka, musika, vakwikwidzi, organic / kubhadhara kukura, nezvimwe. Zvichienderana neiyi yakadzama ongororo, Mobile Action inopa matanho ekuti zviitwe zvekuti vagadziri vangakwidziridze kuoneka kwemaapps avo.
Chigadzirwa chayo chinogona (uye chakabatsira) vanogadzira zvakapetwa zvakapetwa kwavo kwega kurodha mumazuva makumi matatu, pamwe nekurova machati gumi ePamusoro. Chishandiso zvakare chinoita fungidziro dzakangwara dzekugadzirisa App Store mashandiro nekupa vanogadzira tsvagiridzo pane yakanakisa nguva yekumhanyisa mishandirapamwe, zviri kuitika nevanokwikwidza navo, uye inguva yakanakisa yekuvandudza.
Injini inopa ruzivo mune izvo zvinoshayikwa kubva pamashandisirwo ekushandisa evashandisi, maitiro akanakisa, ndedzipi nzira kana maturusi anofanirwa kushandiswa, uye nzira inoshanda kwazvo yekugovera bhajeti. Izvo zvakare zvinoita kuti vagadziri vazive iko kuita kwavo zviito. Semuenzaniso, kukwidzirisa X kiyi kiyi kunoderedza avhareji mutengo pakuisa ne20%. Yese kurudziro yakasarudzika kune yega yega app.
Kuwanikwa kweApple kwakatyoka uye iri idambudziko guru mumusika, nekuti makambani haazive maitiro ekuti maapps avo aoneke. Mobile Action irikuita chii ComScore akaita, asi zvakanangana nemaapps, uye iri kuita chinoshamisa pakubudirira kwavo. Hapana-mumwe mumusika ari kuita zvatiri kuita. Mobile Action muvambi Aykut Karaalioglu
Mobile Action inopa yakazara App Store analytics uye optimization tekinoroji. Mhinduro dzayo dzinosanganisira App Store Optimization, Kurudzira Zviito, Mikwikwidzi Insight Kuongorora, uye Ongororo Ongororo. Kunze kwekutevera uye nekuona, Mobile Action inoshandisa tekinoroji yekufungidzira kuti ipe zviito zvinokurudzirwa zvekuti ungaita sei kuti app yako ive pamusoro.
Disiki: Ndiri kushandisa kodhi yekukoka mune ino posvo. Kana imi vanhu mukasaina, ini ndinowanawo emahara mwedzi yekushandisa pane chishandiso.
Tags: app storeapp chitoro optimizationchinzvimbo chechitorobig datamobile zviitomobile app chitorochitoro chenhare